Taammiruu Demisee Paralympic Riyoo irratti fkn mormii Oromoo agarsiise,alaabaa faarsuu didee afaan qabate
Hariyaan Furii Kaffiyaaloo jettiin,maqaan isaa,Taammiruu Kaffiyaaloo Damiseeti.Taammiruun nama ganna 23ti.
​Dorgommii Paralympic ta bara, 2016 Fulbaana 7-18,bara 2016 Riyoo,Biraazilitti itti jiran.Atileetota 4000 caalanitti itti jira.
“Wanta biyya keessatti godhamaa jiru addunyaatti akka beekamu. Dhiiga saba kiyyaatii ka dhangala’a jiru…kan gubachaa jiru saba kiyya waan taheef---namini meeqa akka du’e hin beekna,kanaaf mormii agarsiise,”jedha.
Kanaafuu jedha Taammiruun mallatoon tun mallattoo ummatii "Oromoo hidhamuu isaa, cunqurfamuu isaa agarsiisu waan taheef agarsiise,” jedha.
Taammiruun waltajjii dorgommii addunyaa irratti mallatoo mormii siyaasaa agarsiisuun 'seera malee' jedhanii yoo fkn seera sun cabsite jedhanii medaaliyaa sirraa fuudhan maan jetta jennaan “kaan lubbuu itti dhabaa medaaliyaa narraa fuudhuun rakkoo hin qabu,” jedha.